जसपाले बल्ल टुंग्यायो जनवर्गीय संगठनका नाम
फाल्गुन १७, २०७७, ७:२७ AM
काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले आफ्ना जनवर्गीय संगठनका नाम टुंगो लगाएको छ । आइतबार बसेको पार्टी समायोजन सहजीकरण कार्यदलको बैठकले जसपाका भ्रातृ-जनवर्गीय संगठनको नाम निर्धारण गरेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य केशव झाले बताए ।
टुंगिएको मर्यादाअनुरूप पहिलोमा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई छन् । दोस्रो र तेस्रोमा क्रमशः अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवको मर्यादा राखिएको छ । चौथो र पाँचौँमा क्रमशः वरिष्ठ नेताद्वय अशोक राई र राजेन्द्र महतो छन् ।
टुंग्याएकोमध्ये कार्यकारिणी समिति र केन्द्रीय समितिमा सदस्य मनोनीत भइसकेका छन् भने राजनीतिक समितिको काम अझै टुंगिएको छैन । संगठनको ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका २६ र समाजवादी पार्टीका २५ सदस्य छन् । आठ सय सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा दुई पार्टीका आधा-आधा राख्ने सहमति भएको छ भने संख्या मात्रै टुंग्याइएको राजनीतिक समितिमा ७५-७५ जना भागबन्डा गर्ने सहमति बनेको छ । तर, समिति बनिसकेको छैन ।
जनकपुरमा क्लिनिकको ब्रह्मलुट, ड्रेसिङ शुल्क १३ हजार !
थरुहट-थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाद्वारा विद्रोहको घोषणा